Iskooradii laga diiwaan galiyay kulankii Man United 1-1 Wolves taako kala kulantay - Raaso News Network ( RNN )
Home » CAYAARAHA CAALAMKA » Iskooradii laga diiwaan galiyay kulankii Man United 1-1 Wolves taako kala kulantay
Iskooradii laga diiwaan galiyay kulankii Man United 1-1 Wolves taako kala kulantay
Posted by: Bakool Net in CAYAARAHA CAALAMKA 23/09/2018	0
Man United garoonkeeda Old Trafford si lama filaan ah waxay taako kala kulantay naadiga Wolves cayaary 1-1 kusoo idlaatay.
Macalin Mourinho ka hor kulankan waxay kooxdiisa soo guuleesatay sedex kulan oo xariir ah sidoo kalena jawi wacan ayay bartanka kaga jireen laakiin Wolves ayaa dhibcaha garoonkiisa kula qeebsatay.
Man United 1-1 Wolves (Fred 18, Joao Moutinho 53)
Fred wuxuu noqday cayaaryahanka 500-aad ee Man United gool u dhaliyo dhamaan tartamada kala duwan waa marka laga reebo xisaabta goolasha Own Goal ama kama gool ah.
Fred wuxuu noqday cayaaryahanka Brazial u dhashay ee Man United gool u dhaliyo EPL tan iyo Febraayo 2013 markaasna Rafeal ayaa gool ka dhaliyay kooxda QPR.
Paul Pogba ayaa ku lug yeeshay 6-gool 7-kulan Man United cayaartay ee lagu soo bilaabay xili cayaareedkan afar gool ayuu dhaliyay halka 2-gool uu caawiyay.
Joao Moutinho wuxuu ahaa goolkii ugu horeeyay ee horyaal ah oo uu dhaliyo 28-kulan kadib waxana ugu dambeesay kulan horyaal ah uu gool dhaliyo November 2017 cayaar kooxdiisii hore Monaco la cayaartay PSG.
Wolves ayaa u suura gashay inaysan Old Trafford wax guuldaro ah kula kulmin tan iyo 1980 waxayna soo idleeyeen 8-kulan oo isku xigtay oo Old Trafford looga badinaayay kooxdan.
Man United ayaa lix dhibcood ku lumisay 7-kulan oo ay garoonka Old Trafford kula cayaartay kooxaha heerka labaad ka imaadeen waa mudada uu Jose Mourinho macalin u yahay halka 10-xili cayaareed (2006/07-2015/16) waqtiga Mourinho ka horeesay kaliya Man United 5-dhibcood Old Trafford ku lumisay kooxaha heerka labaad ka imaadeen kulamada ay EPL la cayaareed.
Previous: Sergio Ramos xad ma lahan! Qaab ciyaareedka cusub ee difaaca kooxda Real Madrid.
Next: FAAFAAHIN :- Shil Sababay Dhimasho iyo Dhaawac Uuna Waday Gaari Weyn Askari Ka Tirsan Ciidanka Dowlada Oo Ka Dhacay Magaalada Muqdisho.